I-Semalt: Ama-plugin we-WordPress oyidingayo uma udala okuqukethwe okuhle
I-Wordpress yiwebhusayithi ejwayelekile enokusetshenziswa komhlaba jikelele. I-Wordpress ibamba ngaphezulu kwengxenye yesayithi yomhlaba. Kubasebenzisi be-WordPress, kunama-plugin angaphezu kuka-44,000 ahlukene ongawafaka. Amawebhusayithi e-Wordpress anokusebenza ngendlela ephezulu ngenxa yezinhlelo ezihlukahlukene zokuphathwa kokuqukethwe abasebenzisa. Amabhizinisi ahlukahlukene ayazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukwenza ngcono ukuthengisa kwabo ngokusebenzisa amasayithi kanye nemisebenzi ephumelelayo ye-eCommerce.
URoss Barber, ochwepheshe ohamba phambili Semalt , uqinisekisa ukuthi ngezindlela ezintsha zokumaketha (digital) , ukudala okuqukethwe kwindlela entsha esetshenziswa abantu ukubeka ulwazi olubalulekile kuma-blogs abo kanye iwebhusayithi.
Ukudalwa kokuqukethwe kuyisici esibalulekile sayo yonke imenenja yewebhu. Iningi lezici zewebsite ye-WordPress lingaphathwa ngokusebenzisa ukusetshenziswa kwama-plugin nokuthuthukiswa kwedeshibhodi. Noma kunjalo, ukudala okuqukethwe kunesinye isici esidinga isenzo esihlukile. I-Google yamemezele ukuthi ukubaluleka kokuqukethwe kuyisici esibalulekile esiza amawebhusayithi ngezimo zabo ngezizathu ezithile. Ubude nekhwalithi yezihloko kuyisici sokudalwa kwewebhu. Kubalulekile ukuthuthukisa okuqukethwe kombulali okungasheshe kwenziwe inqubo yokubeka iwebhusayithi yakho kuwebhusayithi. Kukhona ama-plugin amaningi we-WordPress ongawasebenzisa ukudala okuqukethwe kombulali. Ekugcineni, kufanele ukwazi ukuthola ukuthi iyiphi i-plugin ye-WordPress evumelana kakhulu nezidingo zakho zewebhu.
Le plugin ikusiza ukuthi ubale amagama namazwi wegama elingukhiye. Futhi kusiza ukuhlola ukuhlaziywa kokufunda kwekhasi lakho lewebhu. I-plugin ye-Word Stats ivumela abantu abaqhuba amabhulogi namawebhusayithi eCommerce ukwenza imenyu yokuhlaziywa kwezilimi, isici esinqumayo ukuhambisana kokuqukethwe kwendaba yakho. Ungakwazi ukwandisa kuwebhusayithi yakho usezingeni kuma-SERP ngokusebenzisa le thuluzi. Leli thuluzi le-robot linolwazi olufana nokumelela okucacile kwempendulo yamagama angukhiye nyangazonke, okuthunyelwe okuphukile kanye namazwi angukhiye angu-20 aphezulu. Abantu abaningi bayazuza ngokuthuthukisa amandla okusetshenziswa kwamagama angukhiye ngaphakathi kwe-target niche.
Leli thuluzi yi-Plugin Search Engine Optimization (SEO). Kuyasiza ekwenzeni imisebenzi efana nokuhlola okuqukethwe okuphindwa kabili, ukuhlola ukuthungela kanye nokufuna izixhumanisi eziphukile. Abanye abakwa-webmasters basebenzisa leli thuluzi ukuqhathanisa ukuhlushwa kwegama elingukhiye kanye nezici zokuthuthukisa izinhlobo ezahlukene zokuqukethwe. Kunokukhetha kokuhlola amathegi we-meta kunoma iliphi ikhasi lewebhu. Uma uqala ukwenza iwebhusayithi yakho ye-WordPress, kucacile ukuthi akukho-plugin noma isandiso esingakusiza ekuthuthukiseni. UkuPhuthukisa i-plugin ye-SEO kungakusiza ukuhlunga ikhwalithi yokuqukethwe kwakho okwenza okuthunyelwe kwakho kwewebhu kuhambisane nezilaleli zakho. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi futhi ukukhomba izixhumanisi eziphukile ekusebenzeni kwakho kuwebhusayithi.
Le plugin ngumphathi oyinhloko wokuthunyelwe kwebhulogi. Kungenzeka ukuthi abantu babone zonke izikhundla zabo kanye nokuhudula ezindaweni zabo. Uma udala okuqukethwe kwewebhusayithi, uthola okungaphezu kokuthi umuntu angakhohlwa ukubeka eceleni i-plugin yokuphatha izimbiza zebhulogi. Ikhalenda lokuhlela lingakusiza ugcine ukuqhubeka kokuqukethwe okusha kwabafundi bakho. Le plugin idonsela futhi ilahle izici ezingakusiza ukuthi ufinyelele isimo sebhodwe ngalinye, ubuke konke okuthunyelwe kanye nokuphatha okuthunyelwe okuvela kwabanye abalobi.